तपाइले २ रुपैयाँ बढी भाडा तिर्दा गाडीवालाले दैनिक कति कमाउँछन् ? « Clickmandu
तपाइले २ रुपैयाँ बढी भाडा तिर्दा गाडीवालाले दैनिक कति कमाउँछन् ?
प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०७४, बुधबार ०९:३७
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सार्बजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाइले १५ रुपैयाँ भाडा तिर्दै आउनु भएको होला । तर, सरकारले उपत्यकाको ४ किलोमिटरसम्मको दुरीको लागि १३ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ ।
तपाइसँग गाडीवालाले १५ रुपैयाँ नै माग्छन् । यात्रुले १३ रुपैयाँ दिदा भाडा नै १५ रुपैयाँभन्दै १५ रुपैयाँ नै लिन्छन् । कुनै सचेत यात्रुले १३ रुपैयाँ भाडा हो भन्दै १५ रुपैयाँ दिएर पैसा फिर्ता मागे भने गाडीवाला चानचुन छैन भनेर पनि पन्छिने गर्छन् ।
एक जना यात्रुलाई २ रुपैयाँ त हो नि भन्ने लाग्न सक्छ । एउटा ब्यक्तिको हकमा २ रुपैयाँले खासै अर्थ नराख्न पनि सक्छ । अर्थात २ रुपैयाँले केही पनि आउँदैन, किन चिन्ता गर्ने भन्ने पनि कतिपयलाई लाग्न सक्छ । तर, यही २ रुपैयाँका दरले प्रत्येक यात्रुसँग बढी पैसा उठाउँदा यातायात ब्यवसायीले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक करोड रुपैयाँभन्दा बढी कमाइरहेका छन् ।
ब्यवसायीले यात्रुसँग यसरी बढी भाडा लिइरहदा पनि सरकारी निकाय भने मौन छ । यातायात ब्यवस्था विभागले २०७२ माघ २४ गते काठमाडौं उपत्यकामा ४ किलोमिटरसम्मको भाडा १३ रुपैयाँ तोक्यो । त्यसबेला डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ७५ रुपैयाँ थियो ।
तर, सरकारले तोकेको भाडादर लागू भएन । यात्रुले १३ रुपैयाँ तिर्न खोज्दा पनि सवारी चालक तथा सह–चालकले अपशब्द प्रयोग गर्दै १५ रुपैयाँ भाडा असुली गर्छन् । सार्वजनिक सवारीमा दिनौं आवतजावत गर्ने यात्रुले पनि अहिले भाडा भनेकै १५ रुपैयाँ सम्झन थालेका छन् ।
कारबाही गर्ने अख्तियारी पाएका ट्राफिक प्रहरी गाडी र सवारी चालकको कागजपत्र मात्रै चेक गर्ने गर्छन् । सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुसँग केही सोध खोज गर्दैनन् ।
कहिलेकाँही यातायात व्यवस्था विभागले अनुमगन गरेपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
तपाइ हामीसँग एक पटकमा २ रुपैयाँ बढी भाडा लिदा ब्यवसायीले दैनिक कति कमाएका छन्, त्यो पनि हेरौं ।
यसरी प्रतियात्रु २ रुपैयाँ बढी भाडा लिदा एक दिनमा मात्रै १ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बढी भाडा उठेको हुन्छ ।
अहिले उपत्यकामा दैनिक झन्डै ८९ हजार ५ सय यात्रुवाहक बस, मिनिबस र माइक्रो गुड्छन् । सोही साधनले आफ्नो रुटमा दिनभरमा तीनदेखि ६ पटकसम्म ओहोरदोहोर गर्छन् । तथ्याँक अनुसार ८९ हजार ५ सय सवारी साधनले एक ट्रिपमा मात्रै २२ लाख ३७ हजार ५ सय यात्रु बोक्छन् । यही तथ्यांक अनुसार उपत्यकाका सार्बजनिक सवारी साधनले प्रत्येक दिन ३ पटक ओहोर दोहोर गर्छन् भने पनि दैनिक ६७ लाख १२ हजार ५ सय यात्रुले यात्रा गर्छन् ।
अब फेरि भाडा दर सम्झौं । यात्रुले प्रत्येक यात्रामा गाडीवालालाई २ रुपैयाँ बढी भाडा दिएको हुन्छ । यसरी प्रतियात्रु २ रुपैयाँ बढी भाडा लिदा एक दिनमा मात्रै १ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बढी भाडा उठेको हुन्छ ।
यसमा पनि २० प्रतिशत यात्रु विद्यार्थी हुन्छन् भनेर मानौं । सरकारी र यातायात ब्यवसायीले पनि २० प्रतिशत यात्रु विद्यार्थी हुन्छन् भनेर स्वीकार गरेका छन् । विद्यार्थी सहुलियतको २० प्रतिशत भाडा घटाउँदा पनि प्रत्येक दिन १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उठ्ने गरेको छ ।